İBB akwusiri na Haydarpaşa Sirkeci Station Tender | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulMMM kwụsịrị na Haydarpasa Sirkeci Railway Station Tender
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 1
ibb haydarpasa sirkeci gari churu n’onu
Apụrụpụrụ IMM site na nro nke Haydarpaşa - Sirkeci Railway Station. İmamoğlu; “Echiche ahụ bụ ihe na-atọ ọchị. Mkpochapụ bụ iwu akwadoghị. Anyị ga-eburu okwu a n'ụlọ ikpe ma kpasuo mkpesa gbasara mpụ. ” A ga-arịọ arịrịọ ahụ na Mọnde.
A kpochapụrụ Obodo Obodo Istanbul (IMM) na nro nke State Railways (TCDD) maka ịgbazite ebe nchekwa ọdụ ụgbọ okporo aka Haydarpasa maka “ojiji na ọrụ ọdịbendị na nka”.
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Eurasian Culture Center Mukhtar Workshop tupu emechi nkwupụta ya, kwuru na mkpebi a na ihe kpatara ya bụ ihe ọchị. Imamoglu kwuru, sị: My hụrụ n'anya gwụrụ ... N'ezie a ga m esoro gị kerịta. Dika ekwere m nkwa, aghaghi m ịkọrọ gị ihe niile n'uzo kacha doo anya mgbe ọ dị mkpa. M na-ekwe nkwa na ị na, m ga-aga na ime mmụọ nke obodo a, n'obodo a si maa mma, akụkọ ihe mere eme nke obodo a ... Istanbul ruo n'ụbọchị ikpeazụ, bụ ụbọchị mbụ m malitere na-a mma obodo, m ga-enwe n'ụzọ ọ bụla, ndị 16 nde ndị mmadụ, ọbụna dum na Republic of Turkey 82 Ekwere m nde ndị mmadụ nkwa.
ANY NOT ANY. ANYA
Ọ bụ nke a mere m ji chọọ isoro gị kọọ otu ihe nwute. Lee n'ehihie a, mmiri 17: mmiri nke 00, na nzukọ ebe a na-akpọghị anyị n'ụzọ ọ bụla gaa ụlọ ọrụ nke onye a na-amaghị n'ime ụlọ ọrụ Haydarpaşa na Sirkeci dị na Istanbul maka puku TL. Eleghị anya, ha gbochiri anyị ịbanye n'obi ahụ site na mgbaghara ma mee ka ọ ghara ịmata anyị. M na-ama ikpe, ana m ekwe nkwa n’ihu ụmụ amaala m na aga m eme ihe dị mkpa.
G CHN CH B CHR IN XBỌCH X N’ALI 15?
Dün Ndị na-adabere na ahụmịhe nke 3 puku TL na ụgwọ ọrụ 10 puku TL na ime obodo ụnyaahụ na-elelị ahụmịhe nke di KÜLTÜR AŞ ma na-enwe ngọpụ maka ịnọpụ iche na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ugbu a achọrọ m ịrịọ; Kọmitii a, nke na-anaghị anabata nkwekọrịta mmekọrịta anyị taa, ahụghị ihe ọ bụla na-egbochi anyị ịbanye na ụbọchị 15 dị nro, gịnị kpatara ha jiri sonyere anyị na nro ahụ? Kedu ihe 15 na-agbanwe kwa ụbọchị?
Ikike MMI nke 16 M ga-akpọ BİR
Ka m gwa gị ihe gbanwere, mkpali gị. Lee, aga m agwa onye nọ ebe ahụ na mbụ. Onye obula rigoro onye obula anyi, a ga m acho ikike aka nri nke ndi mmadu nde 16 ka i gha hu. Aga m eme ihe gbasara iwu ozugbo. Aghọtaghị m ihe kpatara anyị. Nke a bụ ebe m na-agwa onye Minista okwu, onye na-adịghị ịkwaga. Ana m akpọ maka nde mmadụ 16. Ugbu a, echere m na m ga-eso ihe ọzọ na-atọ ọchị.
YOÙ NA-EKWU NSỌ?
You nwere ike ịhụ, dị ka nkọwapụta ntochi "nkwonkwo na nkwonkwo kama jikọrọ ọnụ ma gbakọta ọnụ" anyị kwuru na ngwa ahụ! N'ikwu ya, nkwonkwo, nkwonkwo na nkwonkwo kama; ntụgharị onye bụbu onye Turkish, onye bụ onye ọhụrụ. Kedu ihe ị ga-eji lebanye anya na mkpali maka ihe ọchị! Ọ megidere nkọwapụta! Chịrị ọchị na ọnọdụ ahụ, mana ọ dị mwute ikwu na nke a dị mwute. O di nwute, oke ihere, ozo ozo di egwu. Ewepuola anyi n'ihi na ulo oru ime obodo nke batara n’iru a enweghi asambodo ahuhu oru di iche. Gini bu nkpokorita nke Consortium? A na-eme Consortia maka mmecha nke adịghị ike. Dịka m kwuru, ndị ọrụ dị njikere ebe ahụ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ dị njikere ebe ahụ, a na-agwa ha ma zigara anyị ozi oge ahụ; 'anyị mere nro, anyị mere'.
ANY ARE na-eweta odida NA Mọnde
Ana m etinye akwụkwọ mkpesa gbasara ndị omempụ na Mọnde. Anyị na ndị ọka iwu niile na-ahụ maka ndị isi obodo Metropolitan Munyi na otu ndị ọka iwu na-asị 'Achọrọ m isonye na Istanbul. A ga m eme ka ị mata oge ahụ. Ndị ọka iwu anyị ga-aga chọọ ihe ruru nde mmadụ 16. Nke a bụ nnukwu nsogbu, nnukwu okwu banyere echiche a. 16 ga-achọ ikike nke ọtụtụ nde mmadụ, ndị mmadụ họọrọ m maka ya.
AKWUBKWỌ AK PKỌ AH Ṕ NA-AH BE ỌD ANGH BE ANYA NA ANOUT N’OUTLỌ EGO
Kedu ihe na-akpali inye onyinye nke nde mmadụ nde mmadụ 16 nye onye isi obodo ya bụ 10 puku TL na onye bụ onye isi njikwa ego nke 3 puku TL na IMM ruo ụnyaahụ. Ihe ọ bụla mkpali dị ebe a, ọ na-agbasa ebe ndị ọzọ. Anyị ga-achọ ya. Ọ bụ ya mere anyị agaghị eme ka nde mmadụ 16 na-aga maka ya. O nweghị onye nwere ike ịbanye na ogige Haydarpaşa na Sirkeci ọ gwụla ma ndị a ekweghị ha, achọrọ m isoro gị kerịta nke a. ”
IOM ANW THER T MARA NA NSO
İBB sonyere na ụlọ ọrụ MEDYA A.Ş, KÜLTÜR A.Ş, İSBAK A.Ş na METRO İSTANBUL A.Ş. Helọ ọrụ Hezarfen Consultancy nyefere onyinye 300 puku TL kwa ọnwa na mkpesa ahụ, ebe MMI na-enye ntinye 100 puku TL kwa ọnwa.
Mgbe Haydarpasa Station, Sirkeci Station na-emetụta akụkọ ihe mere eme. 16 / 02 / 2012 Mgbe arụchara ụgbọ oloko dị elu n'etiti Istanbul na Ankara na 2013, Yıldırım Yıldırım, onye ga-eje ozi naanị maka ebumnuche nostalgic, yana Haydarpaşa Station, ga-anọ naanị İstanbul
Onye Ministri Transportgbọ njem achọghị ka MMM mezie ya na Haydarpasa Station! 28 / 09 / 2019 Onye Ministri Transportgbọ njem achọghị ka MMM mezie ya na Haydarpasa Station! : Kwuwapụtara na TCDD ga-esonye na 4 dị nro na Ọktọba iji gbazite akụkụ ụfọdụ nke ọdụ Sirkeci na Haydarpaşa maka iji mee ihe omume na nka…
Egbuo ihe na Haydarpaşa na Sirkeci Stations 16 / 04 / 2013 Ederede ngagharị na Haydarpaşa na Ọdụ Sirkeci Ọnọdụ iku egwu nke United Transport Workers Union (BTS) na Turkish Transport Union (TUS) mere na Istanbul na Haydarpaşa na Sirkeci Station. Nzukota na Haydarpa Traa Train Station…
Ihe omuma: Mustafa Efeler ọ sịrị:
ndi okpe okpo okpu na ewere ego iweb ego ebb Nke a bụ otu n'ime Hussein Avni Bey. Ọrụ a enweghị ihe ọ bụla gbasara ya na okpukperechi ma ọ bụ chi .. Onye a ewerela ụlọ ọrụ n'okpuru aha ịgụta otu afọ gara aga ma dụọ ndị na-agba ụta ume. ụbụrụ hüseyin amatalarị nso maka nwa nwoke nke ezinụlọ Erdogan. 10 puku m, 350 puku pound nke isi ego na-ajụ etu esi enye ụlọ mgbazinye, mana ọ nweghị onye jụrụ ajụjụ niile banyere ibb ibn'nin nnukwu ibb. Hüseyin, onye na - aru ​​oru dika onye na - ekpu ego, bu otu o si merie na mbido mbu ya. Nwa amamịghe nke Erdoğan Bey amataghi ya .. 10 puku TL TL isi nke otu ụlọ ọrụ 350 puku ego ole egoyeyebilir.biz ego agaghị akwụ ego okred krediyi.bu obodo a darma anwụrụ.
Sarıgül: Haydarpaşa na Sirkeci Station ga-abụ ihe ngosi nka
TCDD jụrụ Sirkeci Rail Station.
Ntụle na-atụ egwu: A ga-ewere ọrụ nhicha na disinfection (Haydarpaşa, Sirkeci, Halkalı ebe)
E bufere ụfọdụ n’ime ndị na-adịghị anwụ anwụ na ministrị na Haydarpaşa na Sirkeci Station
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa November 2019 (337) October 2019 (608) September 2019 (557) August 2019 (509) July 2019 (634) June 2019 (502) Mee 2019 (526) April 2019 (419) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (582) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (426) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (504) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1076) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (971) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (547) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1058) March 2013 (1101) February 2013 (811) January 2013 (905) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1167) October 2012 (829) September 2012 (886) August 2012 (970) July 2012 (859) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (562) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (11) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)